Ordulular အာရုံစူးစိုက်မှု .. Boztepe cableway စောင့်ရှောက် receiver -! rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ52 ကြည်းတပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလက်ခံခြင်း Ordulular အာရုံစူးစိုက်မှု! .. Boztepe cableway
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 52 ကြည်းတပ်, အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TELPHER 0
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Inc လက်အောက်ခံ ORBEL ဒါဟာကေဘယ်လ်ကားလိုင်းများက operated နှင့် Boztepe ရွှေအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုဂရုစိုက်ရန်ရယူခြင်း "240 operating နာရီ" ဖြစ်ခဲ့သည်။
THE 16.09.2019 18.09.2019 အကြားကျင်းပမည့် CARE
ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်၏နယ်ပယ်များတွင် Boztepe အရေးကြီးသောခရီးသွားလုပ်ငန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေး 16.09.2019 18.09.2019 အကြားနှင့်တကွ, တပ်မတော်ရဲ့သမိုင်း၏နယ်ပယ်အတွင်းစောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့။ ထို့ကြောင့်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းအကြားစောင့်ရှောက်မှု၏ 16 17 18 နာရီနှင့်အတူနံနက်နာရီအတွင်းကျင်းပလိမ့်မည်သည့် 08.00-12.00 နှင့်4စက်တင်ဘာလ, 12.00 ကနေတစ်နာရီအစေခံပါလိမ့်မယ်။ 18.09.2019 နှင့် 09: cable ကိုကားတစ်စီး 00 23 အပေါ်သာမန်ဝန်ဆောင်မှုမှနာရီပြန်ရောက်နေသည် 30 နာရီအကြားအစေခံရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ cable ကိုကားတစ်စီးပေါ်စီစဉ်ထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်၏ပြီးစီးပြီးနောက်ပိုမိုလုံခြုံအများပြည်သူကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
Ordulular မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားချင် 29 / 04 / 2015 မြို့တော်ဝန်ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan Yilmaz: Ordulular မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားချင် "High Speed ​​ကိုရထားလမ်းလာမယ့်နှစ်တွေမှာဆွေးနွေးကြဖို့စီမံကိန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်" - "လေဆိပ်, တက္ကသိုလ်, အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကျန်းမာရေးအဆောက်အဦ၏မြို့တမြို့, အမြို့ပြပုံမှန်ရထားတစ်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဟာအလွန်ပုံမှန်ဝယ်လိုအားများမှာအတွက် "တပ်မတော်မြို့တော်ဝန် Enver Yilmaz" လာမယ့်နှစ်တွေမှာဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းရဲ့တဦးတည်းဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ Yilmaz, ကြည်းတပ်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့အပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကြေငြာခဲ့သည်, ထို AA ကိုသတင်းထောက်တစ်ဦးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ "လေဆိပ်စီမံကိန်းအတွက်, ထို့နောက်သူတို့သည်ငါတို့သူချင်းနိုင်ငံသားများကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ဘို့ဘားမြှင့်" Yilmaz ဒါကငါတို့ရှိသမျှသည်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုသွားကြောင်းတောင်းဆိုနေပြီ "ဟုပြောသည် ...
တပ်မတော် - စောင့်ရှောက်မှုလက်ခံခြင်း Boztepe ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း 15 / 12 / 2015 တပ်မတော် - Boztepe ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း၏စောင့်ရှောက်မှုယူသည်: ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် ORBEL Inc ကိုမူတည် Run ကို, Ordu Boztepe အမှုဆောင် cable ကိုကားတစ်စီးစက်ရုံ၏နာရီအလုပ်လုပ်ကြောင့်စီစဉ်ထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့တာ။ အစောပိုင်းကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းစောင့်ရှောက်မှုအရှိဆုံးစံ၏တဦးတည်းအတွက်လေးလံသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြည်သောကေဘယ်လ်ကြိုးကား 1.5007operating နာရီ "1.500 operating နာရီစောင့်ရှောက်မှု" ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါဂွန်ဒိုလာလှေကေဘယ်လ်ကားဝန်ဆောင်မှုသိပ်သည်းဆမှအကျိုးချင်တော်မူသောငါတို့၏နိုင်ငံသားတွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်မပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်ကလည်းစိတ်တွင်စစ်ဆင်ရေး၏နာရီချိန်ညှိခဲ့။ ကေဘယ်လ်ကားကပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်၏ပြီးစီးပြီးနောက်အောက်ပါညွှန်ပြသည့်ရက်စွဲများအပေါ် 08.00 12.00 ၏နာရီအကြားကို run ပါလိမ့်မယ် ...
ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလက်ခံခြင်းကြည်းတပ် Boztepe ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း 24 / 09 / 2018 ကြည်းတပ် Boztepe စောင့်ရှောက်လိုင်းကေဘယ်လ်ကား receiver: cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်းအားဖြင့် operated ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan ORBEL Inc ကိုလက်အောက်ခံနှင့် Boztepe ရွှေ 1.500 အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဟာ operating နာရီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ကိုပေး။ တနင်္ဂနွေနှင့်ရက် 24.09.2018-12.10.2018 အကြားကေဘယ်လ်ကားလိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်နယ်ပယ် 24.09.2018-12.10.2018 ကြောင်း CARE, ကြည်းတပ် todo Boztepe လွန်း၏အဓိကခရီးသွားဒေသများ၏တဦးတည်းအကြား 13.00 နဲ့အတူ 23.30 09.00-23.30 နာရီအကြားအစေခံပါလိမ့်မယ်။ TELPHER FULL နေ့တနင်္, နာရီ 13.00'T မြို့အလယ်ဗဟိုအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးသောပြည်နယ်များ၏ခရီးသွားဒေသနှင့်အတူရွှေကြည်းတပ် Boztepe အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ရန်ပြီးနောက်အပတ် IF ...
လက်ခံခြင်းစောင့်ရှောက်လိုင်းကေဘယ်လ်ကား Boztepe 15 / 06 / 2019 ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan Inc ကိုလက်အောက်ခံ ORBEL ရွှေ cable ကိုကားတစ်စီးလိုင်းအားဖြင့် operated နှင့်တထောင်တဲ့ operating နာရီစောင့်ရှောက်မှုသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည် Boztepe, 500 အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးခဲ့ပါသည်။ ယခင်ကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း Boztepe နှင့်အတူတပ်မတော်Altınordu, cable ကိုကားတစ်စီး၏အဓိကခရီးသွားဒေသများ၏တဦးတည်းပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအရှိဆုံးမိုးသည်းထန်စွာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု7စံတမြို့အလယ်ဗဟိုဖို့ "500 တထောင်တဲ့ operating နာရီစောင့်ရှောက်မှု" ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုဇွန်လကနေဇူလိုင်လ 17 ဖို့နာရီအကြားရက်အပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဟုတ် 5-08.00 13.00 ။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုအပြည့်အဝနေ့ကဝန်ဆောင်မှုစနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုအများပြည်သူဖို့စီစဉ်ထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်၏ပြီးစီးပြီးနောက်ပိုမိုလုံခြုံပါသည် ...
ကြည်းတပ်လက်ခံခြင်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် Boztepe ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း 31 / 07 / 2019 ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Inc လက်အောက်ခံ ORBEL ဒါဟာကေဘယ်လ်ကားလိုင်းများက operated နှင့် Boztepe ရွှေအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုဂရုစိုက်ရန်ရယူခြင်း "240 operating နာရီ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြည်းတပ် todo ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်နယ်ပယ်များ၏အဓိကခရီးသွားဒေသများ၏တဦးတည်း 05.08.2019- 07.08.2019 နေ့စွဲအကြားစောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း, Maintenance Boztepe လွန်းအကြား 05.08.2019 07.08.2019 ။ ထို့ကြောင့်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းအကြားစောင့်ရှောက်မှု၏567နာရီနှင့်အတူနံနက်နာရီအတွင်းကျင်းပလိမ့်မည်သည့် 08.30, 10.00 နှင့် 1.5 သြဂုတ်လ 10.00 ကနေတစ်နာရီအစေခံပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို 08.08.2019 နာရီကနေ 08.30 23.30 အပေါ်အစေခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုမှနာရီပြန်ရောက် ...
ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလက်ခံခြင်း Boztepe cableway
Boztepe Cable ကိုကားလိုင်း
ကြည်းတပ် Cable ကိုကားလိုင်း
တပ်မတော် - စောင့်ရှောက်မှုလက်ခံခြင်း Boztepe ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း
ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလက်ခံခြင်းကြည်းတပ် Boztepe ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း
Completed, Maintenance အတွက်တပ်မတော် Boztepe လိုင်းကေဘယ်လ်ကား
စောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်ခံရဖို့တပ်မတော် Boztepe ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စက်ရုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများယနေ့မခံနိုငျကြည်းတပ် Boztepe cableway
နှစ်ဦးနေ့ရက်များအတွက်တပ်မတော် Boztepe Ropeway ကို Maintenance Facility
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (392) သြဂုတ်လ 2019 (506) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)